> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Napster in MP3
Inta badan waxaa jira laba sababood users kuwaas oo doonaya inay badalo Napster in MP3.
1. songs Most iibsaday Napster loogu raaxaysan karaa on qaar ka mid ah ciyaartoyda loogu jecel yahay music digital sida Apple iPod. Waxay rabaan in ay u badalaan music Napster in ay MP3 u madadaalada on go ah.
2. Users badan tahay kala soo bixi kartaa heeso Napster ee noocyo ka mid ah noocyada file, sida MP3, regelingen, AAC iyo WMA iwm Sidaas qaar ka mid ah doonayaan inay badalo Napster in MP3 u waafaqsan ballaaran iyo isticmaalka habboon.
Sababtan awgeed wax kasta oo aad qabto, halkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa laba hab fudud oo sooc si aad shaqo taas loo sameeyo 100% si guul leh.
Xalka mid: badalo Napster MP3 isticmaalaya Napster ah in MP3 Converter
Streaming Audio Recorder waxaa loogu talagalay si ay u qoraan audio iyo si toos ah u badbaadin faylka sida MP3 song Napster ciyaara dhex kaarka codka your computer ee. Sidaas, waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo wax songs Napster, sidoo kale si toos ah uga website Napster ama ka disk deegaanka. Iyo saamaynta uu yahay mid aad u weyn. Waxaa loogu badalo karaa Napster in MP3 xawaare la yaab leh, iyo sidoo kale tayada wanaagsan.
Just download oo ku xidh in ay isku day ah. The diinta Napster in MP3 waa laba kaliya talaabooyin fudud.
Fiiro gaar ah: Waxaad gudbin karaan tutorial faahfaahsan adigoo gujinaya halkan: Sida loo Beddelaan Napster in Lugood (The laba talaabooyinka u horeeya ee Qaybta 1aad).
Xalka laba: badalo Napster MP3 for free via Lugood
Fiiro gaar ah: Haddii songs Napster aad hore u yihiin in Lugood ama ay awoodaan in ay la soo dhoofiyo Lugood si guul ah, habkan waa doorashada ugu fiican ee aad. Haddii aan, la qaato kaliya hal xal u go'aansatay.
1. Daahfurka Lugood.
2. Tag "File"> "Add to maktabada", maraan si gal ay ku jiraan dhammaan songs Napster aad, ka dibna ka heli iyo dajiyaan kuwa aad rabto in aad si loogu badalo galay maktabadda music Lugood.
3. Samee playlist cusub ee Lugood. Waxaad hayso laba dariiq oo taas loo sameeyo. Tag "File"> "New playlist" Ama riix "Plus" icon ee geeska bidix hoose. Magaca playlist cusub "Songs Napster".
4. jiid iyo hoos u gabayadii Napster maktabadda Lugood u geliyey "Napster Songs" playlist. Fur playlist ah. Waxaad arki doonaa heesaha oo dhan Napster aad rabto in aad halkan loogu badalo.
5. Hadda, waxaad u baahan tahay inaad dhigay goob Deji sida MPE encoder in Lugood. Si tan loo sameeyo, waxaad riixi kartaa "Edit"> "rabtid" (Waayo, Mac, u tag "Lugood"> "rabtid"), ku dhufatey "Guud" tab, dooro "Settings Import"> "MP3 Encoder" in "Import ah Isticmaalka "doorasho.
6. muujiyo oo dhan songs Napster ee "Napster Songs" playlist, xaq-riix, doortaan "Abuur MP3 version" ikhtiyaarka ka menu dhisayaa-upka. Muddo ka dib, Napster in ay MP3 diinta in la dhameystiro doono.
Waxaa la sameeyey! Iyada oo taageero ka app Lugood, aad u bedeli karaan Napster in MP3 lacag la'aan ah. Laakiin haddii aad ku guuldareysato inay sameeyaan qaab beddelidda in xaggan ama aadan kala soo bixi kartaa music Napster si aad u computer, in xaaladan, Napster aad u weyn in MP3 Converter waa doorashada ugu fiican ee ay kaaga caawiso inaad badalo Napster in MP3 effortlessly.
Sida loo Download Music ka Jango